PangeaDay: Lahatsary natao hanova izao tontolo izao, amin’ny 10 mey 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Mey 2018 3:48 GMT
(Lahatsoratra miteny frantsay nivoaka tamin'ny 3 mey 2008)
Amin'ny 10 mey 2008, filma 24 no halefa mandritra ny lanonana iray maharitra 4 ora. Izay hahatonga ny PangeaDay [en] ho lanonana tsy manam-paharoa ary hotontosaina amin'ny toerana enina eto amin'izao tontolo izao sy amin'ny fiteny fito samihafa. Mety ho hita amin'ny Aterineto, televiziona, na amin'ny finday ny filma. Ny tanjona : mianatra mahafantatra ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny fifantohana amin'izay mampitambatra fa tsy amin'izay mampifanohitra antsika, mba hiasa miaraka mankany amin'ny fandriampahalemana isika. Ny fisantarana andraikitra dia teraka avy amin'ny fanirian'ny Ejiptiana iray mpanatontosa sarimihetsika antsoina hoe Jehane Noujaim [en].
Noho ny fahazoany loka TED [en], notontosaina ny faniriany ary natovana tamin'ny lokany mitentina 100 000 dolara. Ny PangeaDay no nivoadiany: hanova izao tontolo izao ary hisantatra andro iray ahafahan'ny olona eto ambonin'ny tany miaraka amin'ny alalan'ny filma. Tendreo eto raha hijery ny kabarim-panekeny hahazony loka TED [en].
Koa satria mitady ny hampitambatra ny olona ny PangeaDay, dia afa-manesika ny lahatsariny ao amin'ny fantsona lahatsarin'ny PangeaDay izay rehetra maniry hanao izany. Ao amin'io habaka io, azo atao ny mijery ireo lahatsary 1037 efa nasesika tao.
Ohatra, misy filma iray natokana ho an'ny mpianatra zavakanto iray ao Tanzania. Hita ao ny fiainany andavanandro, ny fikasany hampianatra zavakanto ireo kilongan'ny arabe. Eto ambany ny lahatsary:
Mahavalalanina ny fampitaovan'ny PangeaDay : avy any Kairo, Kigali, Londra, Los Angeles, Mumbai ary avy any Rio de Janeiro, ahitana filma, rindrankira, fandraisam-pitenenan'olona manan-daza mba hizara izao vina izao amin'izao tontolo izao. Ireo filma naseho dia voafantina avy amin'ireo filma mihoatra ny 25 000 avy amin'ny firenena anjatony.Mampihetsi-po avokoa ireo filma ireo ary ahafahantsika mijery ny fiainana raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa. Iray amin'ny handray anjara fitenenana ny Mpanjakavavy Noor avy ao Jordania, eo ihany koa ilay mpihira Bob Geldorf, na ry Christiane Amanpour avy ao amin'ny CNN, ary ny Iraniana mpihira rock Hypernova [en]. Ahoana ny fomba handraisana anjara amin'izany? Afaka mandeha any amin'ny iray amin'ireo toerana fanaovana lanonana amin'iray amin'ny tanàna ao anatin'ny lisitra ianao. Afa-misoratra anarana mandray anjara amin'ny lanonana ihany koa ny olon-tsotra na vondron'olona amin'ny alalan'ny famelomana ny fivorian-dry zareo manokana ihany koa [en].
Na izany aza, tsy natao hivoriana mandritra ny efatra ora fotsiny ihany ny PangeaDay. Ny tanjony dia ny handrisihana ny olona hiteny, hifanakalo hevitra ary hanolotra fiovana. Azo atao ny mandray anjara amin'izany ankoatra ny mipetraka ho mpijery fotsiny. Noho ny Nokia, mpiara-miombon'antoka, nahazo finday ahitana fakantsary ahafahana mitantara ny fiainany ireo mpianatra ho mpanatontosa sarimihetsika, na miaina any ambanivohitra ry zareo na any amin'ny tobin'ny mpialokaloka na mianatra any amin'ny sekolin'ny sinema. Azo atao ihany koa ny manesika ny lahatsarinao sy mahazo Nokia N95 8GB. Izany fiaraha-miombon'antoka izany no nahafahan'ny Birmana iray mpialokaloka nandrakitra ny hehin'ny ankizy any India, raha mpiseraka ny tsirinkevitry ny fanantenana kosa ny fianakaviana iraniana iray any amin'ny tobim-pialokalofana iray any Afghanistan. Indiana iray any Bangalore mifilma fanapahana hazo….sy ankizy mamboly hazo vaovao.